बाजुरामा १२ वर्षीया बालिका बलात्कृत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
माघ २, २०७५ अर्जुन शाह
धनगढी — बाजुरामा १२ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएकी छन् । बलात्कार आरोपमा बुढीगंगा नगरपालिका–८ नुवाकोटका ४७ वर्षीय दलबहादुर थापालाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको छ । स्थानीय विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत बालिका साँझपख गोठमा भैंसीलाई घाँस हाल्न गएका बेला नजिकै लुकेर बसेका थापाले बलात्कार गरेको खुल्न आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी उद्धवसिंह भाटले बताए ।
घटना ५ दिनअघि भएको हो । घटनाबारे कसैलाई जानकारी गराए कुटपिट गर्ने धम्की दिएकाले ढिला थाहा भएकोको प्रहरीले जनाएको छ ।
'छोरीको कपडा च्यातिएको देखेर शंका लागेपछि आमाले सोधीखोजी गरेकी थिइन् । त्यसपछि घटना थाहा भएको हो’ डिएसपी भाटले भने, ‘आमाले नै प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि थापालाई पक्राउ गरिएको हो ।’थापाले बलात्कार स्वीकार गरिसकेको प्रहरीको भनाए छ । ‘प्रहरीसमक्ष बालिकाकै सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क गरेको दाबी गरेका छन्’ डिएसपी भाटले भने । थापाका २ छोरा र १ छोरी छन् ।
प्रकाशित : माघ २, २०७५ १३:४५
डा.केसीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न भेन्टिलेटरसहितको विशेषज्ञ टोली इलाम प्रस्थान
माघ २, २०७५ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — अनशनरत डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य उपचारमा सघाउन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट उपकरणसहितको विशेषज्ञ चिकित्सा टोली इलाम प्रस्थान गरेको छ ।
इलाममा ८ दिनदेखि अशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्न थालेपछि उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा उक्त टोली इलामतर्फ लागेको हो । चिकित्सक टोली दिउँसो ३ बजेसम्म इलाम पुग्ने छ।
प्रतिष्ठानका डा. विकास शाहको नेतृत्वमा कार्डियोलोजी विभागका डा. प्रशान्त शाह, इमर्जेन्सी विभागका डा. अजय यादव मेडिसिन, आईसीयुका डा. सविन भण्डारीलगायत ल्याव टेक्नीसियन, नर्ससहितको टोली एम्बुलेन्समा इलामका लागि हिँडेको छ । 'हामी पोर्टेवल भेन्टिलेटर, इसिजी, एडीवी मेसिन, पल्सअक्सिमेट्री, आकस्मिक उपचारमा चाहिने औषधिलगायतका सामाग्रीसहित इलाम पुग्ने क्रममा छौं', एम्बुलेन्समा यात्रारत डा.शाहले टेलिफोनमा भने-'करिब ३ बजे पुगेर डा.साहेवको स्वास्थ्य स्थितिको पूर्ण परीक्षण गर्ने छौं ।'
डा.केसीको मुटु स्वास्थ्यको परीक्षणलगायत विभिन्न प्रकारका जाँचसमेत गरिने छ ।
प्रकाशित : माघ २, २०७५ १३:२५